Chishanu, 10 Nyamavhuvhu 2018
"... zvanzi naJehovha kwamuri, `Musatya, kana kuvhunduka nokuda kwavanhu ava vazhinji, nokuti kurwa hakuzi kwenyu, asi ndokwaMwari" (2 Makoronike 20:15).
Pane imwe nguva, mhuri yaJudha yakanga yakombwa nevavengi. Mambo Jehoshafati akabva aita chimwe chinhu. Chinhu ichi chinoshamisa zvikuru. Tinochiverenga muna 2 Makoronike 20. Mavuto aJudha akanga ari mashoma. Aidarikwa neevavengi ava. Saka vaJudha vakanga vasingagoni kurwisa vavengi ava. Izvi ndizvo zvakataurwa namambo Jehoshafati. Asi akatsvaka batsiro kuna Jehovha. Akanamata achiti, "Haiwa, Mwari wedu, hamungavatongi here? Nokuti hatine simba rokurwa navazhinji ava vanouya kuzorwa nesu; hatizivi chatingaita, asi meso edu akatarira kwamuri". Tinoverenga mashoko aya muna 2 Makoronike 20:12.
Chimwe chinhu chakabva chaitika. Tinochiverenga mundima 14 kusvika 17. Chinhu ichi chakanga chakanaka zvikuru. Zvinonzi, "Mweya waJehovha ukauya pamusoro paJahazieri, mwanakomana waZekariya ... akati: ... zvanzi naJehovha kwamuri: Musatya, kana kuvhunduka nokuda kwavanhu ava vazhinji, nokuti kurwa hakuzi kwenyu, asi ndokwaMwari. Burukai mangwana mundorwa navo ... Imi hamungafaniri henyu kurwapo; zvigadzireipo, murambe mumire henyu, muone kurwirwa kwenyu naJehovha, imi vaJudha naveJerusarema; musatya kana kuvhunduswa; budai mangwana mundorwa navo, nokuti Jehovha anemi".
Jehovha ndivo vakataura mashoko aya. Vakaataura kuna Jehoshafati. Mashoko ainyaradza zvikuru. Asi chitarisa zvakazoitwa naJehoshafati. Akazviita achigadzirira kurwisa mauto aya. Akatora vaimbi. Vaifanira kuimbira Jehovha. Vaifanira kurumbidza runako rwaMwari. Vaifanira kurumbidza hutsvene hwaMwari. Vaifanira kuimba vachiti, "Rumbidzai Jehovha, nokuti nyasha dzake hadziperi". Tinoverenga mashoko aya muna 2 Makoronike 20:21. Mashoko erwiyo rwevanhu vakunda.
Vaimbi ava vakaimba. Vakafamba vachienda kumusasa wevavengi. Bhaibheri rinobva rati, "Jehovha akaisa vavandiri kuzorwa navana vaAmoni, navaMoabhu, navapagomo reSeiri, ivo vakanga vauya kuzorwa navaJudha; vakakundwa". Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 2 Makoronike 20:22. Vaimbi ndivo vakanga vari mberi. Varwi vakanga vari kumashure. Vakazosvika pamusasa wevarwi vaya. Vakawana vose vazviuraya. Jehoshafati akauya nehondo yake. Vakangosvika vachitora fuma yevavengi ava. Havana kufanira kutanga vavarwisa! Kukunda kwakadai kunoshamisa. Asi kune zvakunotidzidzisa.
Kuda tingasangana nezvinhu zvakawoma. Tinofanira kuimba. Tinofanira kuimba nziyo dzekunamata Mwari. Tinofanira kuimba dziyo dzekurumbidza Mwari. Nziyo idzi dzinozokunda muvengi. Saka zvinhu zvinogona hazvo kunge zvakawoma. Unogona kunge uri kusangana nezvinhu zvinotsvaka kukukanganisa. Rumbidza Mwari. Mira paShoko ravo. Vanamate. Shoko iri ndiro rinokukundisa. Usakanda mapfumo pasi! Usabvuma kukurirwa. Imba dziyo dzekukunda. Hareruya!
Ndinokutendai, Baba. Makandiita mukundi munyika ino. Ndinokurira zvinhu zvose zvandinosangana nazvo. Ndinozvikurira ndichiimba nziyo dzevakundi. Ndizere nesimba. Ndinogona kumirisana nezvinonetsa muhupenyu. Nenzira iyi, zita renyu rinorumbidzwa. Rinokudzwa. Muzita raJesu. Ameni.
Mapisarema 149:1-6; 2 VaKorinte 2:14-15 MSG
(Munogona kuwana Rhapsody rese pa : https://bit.ly/rhapsodylanguages )